पहिलो पार्टी बनाम तेर्सो-पार्टी डाटाको मार्केटिंग प्रभाव | Martech Zone
डाटा चालित मार्केटर्सको ऐतिहासिक निर्भरताका बाबजुद तेस्रो-पार्टी डाटा, Econsultncy र सिग्नल द्वारा जारी एक नयाँ अध्ययन उद्योग मा एक परिवर्तन प्रकट गर्दछ। अध्ययनले पत्ता लगायो कि reporting१% मार्केटरहरूले रिपोर्टि। गरे जुन उनीहरू प्राप्त गर्छन् तिनीहरूको डाटा-संचालित पहलहरूबाट उच्चतम ROI प्रयोग गर्दा पहिलो पार्टी डेटा (मुख्य धारामा उनीहरूका pe१% साथीहरूसँग तुलना गर्दा) केवल %१% सँग तेस्रो पार्टी डाटा उद्धृत गर्दै। यो पारी गहिराइमा पर्ने अपेक्षा गरिएको छ, सबै मार्केटर्सको of२% ले उनीहरूको पहिलो पक्षीय डाटाको प्रयोग बढाउने योजनामा ​​सर्वेक्षण गरे (०% ले कमी हुने रिपोर्ट गरेको छ), जबकि in मा १ जनाले तेस्रो पक्ष डेटाको उपयोग घटाउने योजना गरेका छन्।
पहिलो-पार्टी र तेस्रो-पक्ष डेटा बीचमा के भिन्नता छ
पहिलो पार्टी डेटा तपाईंको संगठन द्वारा संकलित र स्वामित्वमा छ। यो स्वामित्व डाटा हुन सक्छ जस्तै ग्राहक सर्वेक्षण परिणामहरू र डाटा खरीद। तेस्रो-पार्टी डेटा एक अर्को संगठन द्वारा संकलन गरिएको छ र या त यसको सम्पूर्णतामा खरिद गरियो, तपाईंको हालको ग्राहक डाटामा थपियो, वा तेस्रो-पार्टी अनुप्रयोगहरू मार्फत उपलब्ध छ। मुद्दाहरू प्राय: तेस्रो पार्टी डाटाको सटीकता र समयबद्धताको साथ देखा पर्दछ।
दोस्रो पार्टी डेटा अर्को विकल्प हो तर कम्पनीहरू द्वारा कम प्रयोग गरिएको। दोस्रो पार्टी डेटा कर्पोरेट साझेदारीबाट संकलन गरिन्छ। दर्शकहरुलाई साझा गरेर, प्रतिक्रिया दर धेरै बढी हुन सक्छ, ग्राहक डेटा अधिक धनी हुन सक्छ, र डाटा अझै दुबै सहि र समयमै छ। यदि तपाइँ तपाइँको ग्राहकहरु मा अधिक डाटा प्राप्त गर्न को लागी संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ, तपाइँ एक कम्पनी संग साझेदारी छ कि तपाइँको ग्राहकहरु लाई साझा गर्न सक्नुहुन्छ!
वर्षौंसम्म, तेस्रो-पक्ष डेटा डिजिटल मार्केटिंगको मुख्य आधार भएको छ, तर आजको उच्च प्रदर्शन गर्ने कम्पनीहरू आन्तरिक रूपले आफ्नो पहिलो पार्टीको लगतमा हेर्दै छन्। राम्रो ग्राहक अनुभवहरूले राम्रो डाटाको माग गर्दछ। ब्रान्डले व्यक्ति र दर्शक बान्की-च्यानल अन्तर्क्रिया र उनीहरूको भूमिका ग्राहक यात्रा को बुझ्नु पर्छ-ग्राहकहरू के चाहन्छन् र जब उनीहरू यसलाई चाहन्छन्। हरेक केसमा, वास्तविक ग्राहकहरुबाट पहिलो पार्टी डेटा सबैभन्दा उपयोगी हुन गइरहेको छ।
सर्वेक्षण परिणामहरू 302०२ मार्केटरमा आधारित छन् र मे २०१ 2015 द्वारा सम्पन्न गरिएको थियो इकोन्सल्टेंसी र संकेत.
मुख्य जानकारी तपाइँ यस रिपोर्ट मा फेला पार्नुहुनेछ
कम्पनीहरूका लागि प्रतिस्पर्धात्मक फाइदाहरू के हुन् जुन उनीहरूको स्वामित्व डाटा प्रयोग गर्नमा बढी सिपालु छ?
कहाँ उच्च प्रदर्शनकर्ताहरू आफ्नो पहिलो-पार्टी डेटा स collect्कलन गर्छन् र कसरी त्यो मूलधारबाट भिन्न छ?
संगठनहरू आफ्नो पहिलो पार्टी डेटाको अधिक राम्रो फाइदा लिन कोशिस गर्दै पहिलो चरणहरू के छन्?
कुन विशिष्ट डाटा प्रकारहरूलाई सटीकता र उपयोगिताका लागि उच्च मूल्या rated्कन गरिएको छ?
टैग: ग्राहक डाटाग्राहक डाटा रोईग्राहक बुद्धिमत्ताडाटा सटीकताडाटा रोईपारिस्थितिकीपहिलो पार्टी डाटादोस्रो पार्टी डाटासंकेततेस्रो पार्टी डाटा
स्वचालित परीक्षण र प्रशंसाको साथ तपाईंको मोबाईल अनुप्रयोगको अनुकूलन